सेतो दाँत | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
पोस्ट ट्याग "सेतो दाँत"
सेतो दाँत , दाँत Whitening उपकरण , दाँत whitening उत्पादनहरु
सुन्दर चमकदार दाँत छ पनि लगभग सबैलाई को सपना रही र सायद तपाइँको. आफ्नो दाँत पहेंलो रहन वा राम्रो टूथपेस्ट नियमित लिंदा पछि blemished भने, तपाईं काउन्टर दाँत whitening, किरा भन्दा एक नियमित आधार मा कुनै पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ. त्यहाँ एक गुच्छा छ दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका बजार मा र पनि अनलाइन तपाईं लागि रोज्न सक्नुहुन्छ. तर, ती सबै दाँत दांत मा नै काम छैन. दाँत सेतो गर्न सर्वश्रेष्ठ तरिका राम्रो र छिटो काम, जबकि कम गुणस्तर उत्पादन सेतो गर्न दाँत छैन. यस्तो मुख ट्रे रूपमा सामान्य दाँत whitening, किरा प्रयोग, gels दांत, स्ट्रिप्स दांत आफ्नो दाँत Whiter बनाउन को लागि राम्रो विकल्प छ, तर यस्तो किरा अक्सर साइड इफेक्ट छोड्न. त्यो किन धेरै मानिसहरू यस्तो किरा प्रयोग गर्न चाहँदैनन् छ. के तपाईं तिनीहरूमध्ये हुनुहुन्छ भने त तपाईं यस्तो दांत घर दाँत लागि रोज्न सक्नुहुन्छ दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका सर्वोत्कृष्ट र छिटो परिणाम लागि.
त्यहाँ थुप्रै कारण छन्, जो आफ्नो दाँत discolored बनाउन सक्छ. धूम्रपान चुरोट, सुर्ती चबाने, रेड वाइन पिउने, सोडा, चिया र कफी discolored दाँत बनाउन सक्छ. त्यसैले, क्रममा आफ्नो दाँत Whiter बनाउन, तपाईं पहिलो यस्तो बानी छोड्ने गर्नुपर्छ. बुढ्यौली प्राकृतिक प्रक्रिया र फलाम पूरक जस्तै केहि दबाइहरु, भिटामिन पूरक, र केही एन्टिबायोटिक पनि दाँत को रंग असर गर्न सक्छ. यहाँ केही सजिलो छ, छिटो र सबै भन्दा राम्रो तरिका दाँत सेतो गर्न उपचार.
दाँत सेतो गर्न सर्वश्रेष्ठ तरिका
तपाईं एक घर दाँत दांत हो कि उत्पादन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका दाँत Whiter बनाउन. यस्तो उत्पादन सस्तो र प्रयोग गर्न सजिलो छ. यसबाहेक, तपाईं कुनै व्यावसायिक दन्त चिकित्सक जाँदै बिना यस्तो उत्पादनहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. एक घर दाँत दांत किरा साधारण whitening, स्ट्रिप्स र मुख जेल आउँछ. तपाईंले यो राख्न आवश्यक सबै भन्दा राम्रो तरिका दाँत सेतो गर्न उत्पादन राम्रो परिणाम लागि आफ्नो दाँत मा रूपमा निर्देशित. तपाईं सबैभन्दा आषा परिणाम चाहनुहुन्छ भने, तपाईं रात मा सुत्न जानुअघि आफ्नो दाँत मा राखिएको उत्पादनहरु राख्नु पर्छ, कम से कम 10 मिनेट. पनि नियमित रूपमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न आवश्यक.
अर्को राम्रो तर महंगा दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका विकल्प एक दन्त चिकित्सक गरेको कोठामा जानुहोस् छ. यो सबै भन्दा राम्रो दाँत whitening, को सबैभन्दा छिटो तरिका हो. एक दन्त चिकित्सक सामान्यतया दाँत विरंजन किरा को सहायता पाउने, लेजर प्रकाश र दाँत gels मुख ट्रेमा पोखे (ओछ्यानमा जानुअघि लगाउँथे गर्नुपर्छ) रोगी गरेको दाँत Whiter बनाउन. एउटा व्यावसायिक दाँत दांत उपचार तपाईं कहीं बीच तिर्नु पर्ने हुन सक्छ 250 USD र 900 अमेरिकी डलर. यसलाई धेरै नै महंगा छ तापनि, अझै यो भन्दा राम्रो र सामना गरिरहेका परिणाम प्रदान.
तपाईं हो भन्ने पदार्थ दांत घर दाँत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका आफ्नो दाँत दोष-मुक्त बनाउन. तपाईं आफ्नो दाँत Whiter बनाउन बेकिंग सोडा र पनि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. ती दुवै दाँत सफा गर्न मद्दत गर्ने उत्कृष्ट विरंजन एजेन्ट हो. यो बेकिंग सोडा प्रकृति मा घर्षण छ र यसरी दाग ​​र tartars हटाउन मद्दत गर्छ. तपाईंले तिनीहरूलाई को राम्रो पेस्ट गरेर अलग वा सँगै तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. लिंदा गर्दा पनि तपाईं टूथपेस्ट मा बेकिंग सोडा को चिम्टी छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 5, 2016 12 मा:21 AM
विभाग: सेतो दाँत सुझाव ट्याग: दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका, दन्त चिकित्सक गरेको कोठामा, दाँत विरंजन किरा, दाँत whitening,, दाँत whitening उत्पादनहरु, सेतो दाँत